Hihaona amin'ny Arirang 151, ny Android Korea Avaratra | Androidsis
Hihaona amin'ny Arirang 151, ny Android Korea Avaratra
Nahazo laza malaza i Korea Avaratra noho ny tsy fitovizany amin'ny tanindrazana sy ny fifehezana ny olom-pireneny. Saingy, na eo aza izany, ny fampiasana finday avo lenta, na dia ahenan'ny tsy fisian'ny tsiambaratelo ananan'ny mponina aza, dia tsy foana, ary io no manana smartphone Android -eny, toy ny Android!- antsoina hoe Arirang 151.
Ity fitaovana ity dia manana dikanteny Android 4.4.2 Kitkat novaina be indrindra, ary mazava ho azy fa izany dia natao mba hitazomana ny fibaikoana ny mpampiasa azy, izay ahazoan'ny governemanta Koreana Tavaratra fidirana amin'ny angon-drakitra isaky ny finday. Na izany aza, ny Arirang 151 dia manana fiasa mendrika ho an'ny smartphone. Lazainay bebe kokoa aminao!
Arirang 151 Endri-javatra
Ity fitaovana ity dia misy horonan-tsary fampiroboroboana milanja 500MB eo ho eo, ho fanampin'ny kinova Android 4.2.2 Kitkat, araka ny efa noresahintsika teo aloha, sy lalao maromaro toa ny Super Mario, Angry Birds, Cut the Rope ary fampiharana mahaliana toa ny AppLock, ankoatry ny hafa.
Amin'ny lafiny iray, Nalefa tamin'ny 2016 ity fitaovana ity, ary mampiditra bateria 2.500mAh, fakan-tsary lehibe 13MP, efijery HD 1280-inch (vahaolana 720 x 5). Izy io koa dia manana Bluetooth, fifandraisana 3G, Wi-fi, fahatsiarovana anatiny 4GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny karatra microSD 32GB sy slot ho an'ny micro SIM.
Mikasika ny refy dia refesina 143mm avo x 70mm ny sakany x 7.65mm ny hateviny, ary milanja 148 grama.
Ny Arirang 151 dia mampiditra fampiharana AppLock ho an'ny «fiainana manokana»
Voalaza tsara fa i Korea Avaratra no mamokatra azy, na dia misy koa ny resaka ataon'izy ireo any Shina ary avy eo manondrana azy. Ny marina dia Ireo Koreana Tavaratra dia tsy manana tsiambaratelo loatra amin'ny finday avo lenta arak'izay tadiavin'izy ireo, na tahaka ny ataontsika.
Tianay ho fantatra izay hevitrao momba an'io, ary, noho izany, mamela anao hanao fanadihadiana izahay: Inona ny hevitrao momba ity finday ity? Mihevitra ve ianao fa noho ny fampiharana AppLock ananany, manana fiainana manokana ve izy ireo? Sa fahatsapana tsiambaratelo sandoka fotsiny omen'ny governemanta ny olom-pireneny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Hihaona amin'ny Arirang 151, ny Android Korea Avaratra
Ny LG V30 dia manomboka mahazo ny fanavaozana ny Android Oreo